Wasiirka Amniga oo sheegay inuu tallaabo ka qaadayo saraakiishii joojiyay dibadbaxa - Caasimada Online
Home Warar Wasiirka Amniga oo sheegay inuu tallaabo ka qaadayo saraakiishii joojiyay dibadbaxa
Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiirka Amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa ka hadlay falkii Maanta lagu joojiyey banaanbax ay dhigayeen dad shacab ah, kaasoo looga soo horjeeday afgambigii la sheegay inuu isku dayey madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
“Waxaa isoo gaartay Cabasho ah in hay’adaha Amniga gaar ahaan booliska dalku wax yeelo u gaysteen mas’uuliyiin iyo shacab ka qayb gelayay isu soo bax nabadeed,” ayuu yiri Wasiirka.
Sidoo kale wuxuu sheegay inay ku sameyn doonaan sida ay wax u dhaceen, waxaana shacabka iyo mas’uuliyiintaas uu sheegay in uu u xaqiijinayo in aan marna la aqbali doonin in saraakiisha hay’adaha amniga ku kacaan falalka lagu soo eedeeyay.
Ugu dambeyn Wasiir Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa ugu baaqay Shacabka in ay is dejiyaan lana ilaaliyo xasiloonida Caasimada lana aqbali karin wax rabshada ah.
Warkaan kasoo baxay Wasiirka Cabdullaahi ayaa yimid kadib markii Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Wasiirkii hore ee Amniga ee Galmudug Axmed Macalin Fiqi ay sheegeen in taliye ku-xigeenka ciidanka Booliska Kaniif iyo Taliyaha Booliska Gobolka Banaadir Farxaan Qaroole ay joojiyeen dibadbax lagu taageerayay Ra’iisul Wasaare Rooble.
“Dibadbax looga soo horjeedo afgambigii Farmaajo, ayaa waxaa hor istaagay Farxaan Qaroole iyo Kaniif. Raysalwasaaraha Rooble iyo Wasiirkiisa amniga waxaan ka codsanaynaa in ay dadka ka horwareejiyaan haraadiga kaligii takiska,” ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
Ciidamada Booliska ayaa dhowr jeer oo kala duwan waxay horey u hor istaageen banaanbaxyo looga soo horjeeday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.